Bushraa: Dhamaan maqaalada qoraaga Soomaaliyed C/waaxid Khlaiif-wafaqahu Allaah- - Page 3 - Shabakadda Al-Qimmah||Golaha U Gargaarayaasha Mujahidiinta
#21 9th November 2009
Sayfu Imam Dawahiri
Shariifka oo Dandaawiga Masar ka Dheereeyey (Xijaabka)
Ilaah baa mahad leh. Nabadgelyo iyo naxariis nabi Muxamed korkiisa ha ahaato. Fiicnaan lahaydaa haddii la is maqli lahaa! Bishii Juun, 2008-dii waxaan soo qoray maqaal cinwaankiisu ahaa: Turaabiga Soomaaliya, Sheekh Shariif! Hoos ka fiiri ningaxa
maqaalka: http://www.somalitalk.com/2008/jun/25jun508.html Maqaalku igama ahayn inaan Shariifka iska dacaayadeynayo. Markaas waa markuu Asmara ka soo tagay oo uu bilaabay inuu fuliyo wixii CIA kula heshiisay markuu Nayroobi u cararay. Markaas murtadnimadiisu ma caddaan laakiin waxaan ogaaday inuu Zindiiq yahay. Waxaan Xasan-At-Turaabi ugu hadal qabsadayna saasay ahayd. Waxaan maqaalka uga dan lahaa in wiilkaas la soo buuxiyey oo soo wado inuu ku hadlno kalmado gaalnimo ah! Waxaan shacabka tusayey inaysan soo dhoweysan. Soomaalida soo dhoweysay waxaa ugu horreeyey dad culumo sheeganaya iyo kuwa �mujaahidiin/maxkamado� sheegan jiray! Waxaa la yaab leh haddii isagu qamiiskii tuuray muxuu u rabaa inuu dumarka muslimiinta ah xijaabka uga tuuro? Ma in Amisom ku raaxeysato jirka dumarka Soomaaliyeed? Mise qandaraaskii loo soo dhiibay baa ahaa in ragguna qamiiska tuuro, dumarkana xijaabka?! Madaxda Carabta oo sidiisoo kale Maraykan xukumo, ma tuuraan qamiiskooda ee maxaa isaga qamiiska ka tuuray? Wuu gashan karaa surwaal iyo jaakad laakiin sidoo kale wuu gashan karaa qamiis, hoosgunti, go�yaal iyo wixii la mid ah. Qadaafi shirkii Jaamacadda Quruumaha ka dhaxaysa wuxuu xirnaa dhar u gooniya halka Shariifku fiicnaan mooday surwaal iyo jaakad. War ninku ma meel buu ku xirnaan jiray? Qaadan ogaa waxa loo yeeriyo? Sawir-gacmeedka Amiin Caamir marka Shariifku diyaaradda ku ciyaarayo isagoo hareereysan waxbaa ka jira! Shariifkoo kale ma ahayn inaan waqti ku luminno laakiin waxaa Ilaah ummadda ka qabtay kuwii sheegtay Hay�adda Culumada Soomaaliyeed. Nin annagii caamada ahaa ku sheegnay zindiiq bey ku sheegeen �amiirul mu�miniin!� Marka qof aan xumaantiisa ognahay yeynaan cidna kale ku addeecin. Marka nimankaasi Ilaahay inta u toobad keenaan yaan la maqal iyagoo mar dambe wax ka sheegaya muqaawamada. Waxaa culumo u baas lahaaday kuwa caamadu ka badiso waaqica iyo sida wax u dhacayaan! Ilaah baa mahad leh haddii waxaan ku sheegi jirnay Ilaahay caddeeyey. Dad yar baa igu yiri: Shariifka daaqad baad kala baxday oo waa ku xadgudubtay! Anna waxaan ku oran jiray: Ilaah baa caddeyndoona waxa jira. Marka soow hadda inta dhaafay Dandaawiga Masar oo isagu indho-shareer ka hadlayey; Shariifku uma soo dhigan xijaabkii Ilaah waajibiyey? Shabaabku waa asiibeen markay murtad ku sheegeen. Xitaa hadduusan horay gaal u ahayn; wuxuu ku hadlay maalintii dhoweyd waa ku gaaloobay. Marka haddii Janaqow iyo isaguba inta tuureen qamiisyadii oo ay jaakadda kuleetigeeda hoosteeda (lapel) calanka Soomaaliyeed ku dhagsadeen kama yeelaynno inay xijaabka ka tuuraan dumarka Soomaaliyeed. Kolley afarta xaafadood eed heysataan waxaa u badan maryo calas laakiin haddii dumarka jooga loogu soo dhigto xijaabkooda waxaa u furan inay u tallaabaan dhanka kale ee Muqaawamadu joogto. Ilaah baa mahad leh ummadda Soomaaliyeed usoo diray Shabaabka iyo Muqaawamada kale. Ilaah baa mahad leh marba hadduu socon waayey waxay CIA-du u yeerisay Shariifka. Waa Ilaahay mahadi haddii Shariifku xitaa heysan magaalo sida Jowhar ama Baydhabo oo kale ah oo mar Maxamed-dheere iyo C/hi Yuusuf ka talin jireen. Marka shariifoow ma heysid meel aad ka taliso iyo dumar Soomaaliyeed ood u taliso marka sidii aad qamiiska u tuurtay haddaad dumarka idin hoos jooga (xaasaskiinna) aad xijaabka ka tuuraysaan idinkay idin jirtaa laakiin dumarka Soomaaliyeed Ash-Shabaab baa u jooga. WA SALALLAAHU CALAA NABIYAA MUXAMADIN WA CALAA AALIHI WA SAXBIHI WA SALAM,
SUBXAANAKALLAAHUMA WA BIXAMADIKA ASTAQFIRUKA WA ATUUBU ILAYKA,
WA YAQDACA DAABIRAL KAAFIRIIN,
WAA AAKHIRU DACWAANAA: ALLAAHUMAJCAL MINAL MUJAAHIDIINA A IMATAN YAHDUUNA BI AMRIK WAMKIN LAHUM FIL ARDI,
ASALAAMU CALAYKUM WARAXMATULLAAHI WA BARAKAATUHU.
cabdul waaxid khaliif
Send a private message to Sayfu Imam Dawahiri
Raadi Dhamaan Mawaadiicda uu qoray Sayfu Imam Dawahiri
#22 9th November 2009
Suufiyaasha oo Abaar iyo Odayo-garaacid laga Qaaday (Galgaduud) (W/Q:-C/Waaxid Khaliif) Muqdisho,Isniin,09, Nov,2009 (Hillaac.Net) Ilaah baa mahad leh. Nabadgelyo iyo naxariis nabi Muxamed korkiisa ha ahaato, Waxaa Ilaahay Suuratul Acraaf ku leeyahay haddaan Soomaali ahaan u micneeyo: Haddii dadka magaalooyinku rumeeyaan oo dhowrsadaan waxaan ku furi lahayn korkooda barakada samada iyo dhulka; weyse beeniyeen waxaana u qabanay waxay kasbadeen.
Sidoo kale Suuratu Nuux waxay leedahay haddaan Afsoomaali ahaan u cabbiro: Waxaan ku iri: Rabbigiin dambi dhaaf weydiista. Cirka roob badan ha idin ka keenee. Hana idiin kordhiyo xoolo iyo wiilal iyo beero hana idiin yeelo wabiyaal. Suuratul Jinn waxay leedahay sidoo kale:
Hadday dadku ku toosaan jidka waxaan ka waraabin lahayn biyo badan.
Qof kasta waa ogyahay inaan Obama iyo Zenawi keeni karin roob. Qof kasta waa ogyahay in nimcooyinka iyo barakada dunida uu roobku kaga jiro kaalinta koowaad. Iska daa waddan Soomaaliya oo kale ah oo reer guuraa u badane haddii waddamada reer Galbeedka roobku yaraado waxaa ka soo hara cabaad iyo biyo la�aan. Haddee waa biyihii la cabbi lahaa iska daa beero iyo wax kale!
Sida culumadu sheegto, barakadu meel kastay gashaa sida cilmiga, waqtiga, xaaska iyo caruurta, risqiga, ganacsiga, ammaanka iyo waxyaalo badan. Meelaha Suufiyaashu joogaan waxaa iskaga carara dhalinyarada oo waxay noqotaa meel dambeysa xagga cilmiga iyo shaqada. Bidcooyin warkeed ha sheegin. Waxaana taga CIA-da iyo sirdoonka Tigreega.
Maqaalka micnihiisu maaha inaan dad muslim sax ah aysan abaari ku dhici karin. Sidoo kale lagama fahmayo inaan dad gaalo ah roob heli karin ee waxa laga hadlayo waa marka Xaqa iyo baadilku is-hayo waxaa mar kasta guuleystaa oo Ilaah u naxariistaa Xaqa.
Magaalooyinkii Suufiyaashu xukumaan sida Guriceel, Dhuusamareeb iyo Caabudwaaq waxaa laga sheegayaa abaar daran iyo biyo la�aan halka meelaha kale ee Koonfurta ee Muqaawamadu gacanta ku heyso Ilaahay roob siiyey. Xaggeyga arrintaasi micno weyn bay ka samayneysaa.
Nimankan Suufiyaasha ah waxaa lacag siiyaa CIA-da. Waxaa hubka loo mariyaa Itoobiya. Waxay lacagta loo soo mariyaa Kenya. Saasooy tahay waxay sheeganayaan dariiqo diimeed. Arrimuhu markay halkaas gaaraan Ilaahay nasrigiisu waa yimaadaa.
Wiilashaas Shabaabka ah ee yaryar oo gaalo cad, mid madow, madaxda waddamada muslimiinta, maamulada Soomaaliya ka jira, Suufiyo, Cilmaaniyiin, kuwo qabyaaladdu madax martay, Bulshada Rayidka iyo dadweyne badan ka soo horjeedaan saasooy tahay Ilaahay waa sharfay. Meelahay joogaan nabad iyo kala-dambeyn baa ka jirta. Qof kasta oo caqli lihina waa arki karaa.
Maaddaama intaas oo cadow ay Mujaahidiinta isku kaashadeen waxaad mooddaa in Ilaahay rabo inuu shacabka tuso cidda saxsan labada qolo ee Shabaabka iyo Suufiyada. Waxaad mooddaa in shacabka oo xoolaha nool ku xiran la tuso inaan CIA iyo Zenawi wax kuu tari karin oo aysan roob keeni karin. Marka haddii Suufiyadu meesha sii joogaan iyadoon xabbad la idinku ridin baad gaajo iyo cudur u dhamaanaysaan. Waa garan karnnaa kulaylka iyo cudarada ay abaartu leedahay. Dhibtaas oo jirta haddii Suufiyaashu dagaal iyo diin la�aan ka furaan dhulkaas waa dhibaato kale.
Caano daatay dabadoodaa la qabtaa ee odayaashii u yimid Shabaabka ee yiri ku soo dhowaada Guriceel iyo Dhuusomareeb waa ku saxsan yihiin. Odayaasha Caabulwaaqna waa ku fiicnayd inay saasoo kale yeelaan. Marka intii diin la�aan, abaar, cudurro, kuleyl iyo dagaal aan laga daynayn Suufiyada idin heysan lahaa; hal mar meel halooga soo jeesto nimankaas diinta Ilaahay la dagaalaya ee gaaladu taageereyso.
Waxaa hadda la leeyahay Suufiyaashu waxay garaaceen oo jirdileen odayo-dhaqameed Guriceel iyo Dhuusamareeb ka soo jeeda! Waa arrin la yaab leh. Hadday arrintaasi run noqoto waxaa cad in Suufiyaasha iyo Amisom isku meel laga soo diray. Amisom dan kama leh markay suuqyada Xamar madaafiicda la dhacayaan. Sidoo kale waxaa muuqanaysa inaan qabuur-caabudku dan ka lahayn siday odayaasha ula dhaqmayaan.
Saan horay u iri: waa dhacdaa in hogaamiye caadil ah ay abaari ku dhici karto. Laakiin waxa ka dhacay seddexda magaalo iyadoo magaalooyinkii dhinacyada ka xigay doogsadeen waa calaamo la tusayo dadweynaha inay ogaadeen inaan Tigreegu roob keeni karin. Marka dadkaas reer guuraaga ahi ma ku cibroqaadanayaan?
Markii xaqa iyo baadilku is hardinayey waa tii Ilaahay abaar ku qabtay Makkah ilaa Qureysh nabiga (SCW) ka codsadeen inuu kala hadlo nabadoon Thumaamah oo Qureysh ku yiri: ilaa nabi Muxamed (SCW) idiin fasaxo hal xabbo oo qamadi ah idin kama iibinayo. Maaddaama shacabka Soomaaliyeed guud ahaan uusan gaalo ahayn haddana nimankaas qubuuraha caabuda waa niman shirki ku jira. Marka odayada u yimid Shabaabka si ay u tagaan Guriceel iyo Dhuusamareeb waa saxsan yihiin. Marka Shabaabka iyo shacabka Soomaaliyeed ee kaloow soo dhoweeya odayaashaas. Haddii Ilaahay idmo waxaan aaminsanahay marka Shabaabku tagaan Guriceel iyo Dhuusamareeb in roob di�i doono xitaa haddii la galo waqti aan ahayn waqtigii roobku di�i jiray. Marka maqaalka noo xiga waa iyadoo qabuur-caabudkii laga saaray dhulkaas oo roobban. Insha Allaaha, arrintaas waan aaminsanahay. Marka odayaashu waa ku saxsan yihiin inay ka toobad keenaan soo-dhoweyntii ay kuwa qabuuraha caabuda ku soo dhoweeyeen degaankooda. Marka meel fiican bay arrintu maraysaa ee dhulka halaga xoreeyo nimankaas gaaladu wadato.
WA SALALLAAHU CALAA NABIYAA MUXAMADIN WA CALAA AALIHI WA SAXBIHI WA SALAM,
W/Q:- Cabdulwaaxid Khaliif <cabdulwaxid@hotmail.com>
#23 16th November 2009
Xisbiga Islaamka ee Soomaaliyeed!
Kooxdii rabta inay wax burburiso waxay soo qaadataa magac qowmiyadeed sida Soomaaliya! Dowladdii milatariga ahayd markii loola dagaalay qaab qabiil, qabiil kasta wuxuu soo qaatay magac uu ka dhex muuqdo xaraf weyn oo Sa ah sida SSDF, SNM, USC, SPM, SNF iyo magacyo kale. Magacii ugu macquulsanaa ee ugu nifaaq yaraa wuxuu ahaa: RRA oo Digil iyo Mirifle lahaayeen. Waxaa iskaga tageen Sa-dii lagu gabban jiray oo qabiilka Raxanweyn bay sheegteen! Mar dambe, Zenawi oo fahansanaa faa�iidada ay cadowga u leedahay magaca Soomaali ee lagu qaraabanayo baa qolyihii USC, SSDF iyo RRA sheegan jiray ku mideeyey magac kale oo Sa-du ku jirto: SRRC!
Hadda ka hor baa gaaladu magaca Carabta ku kala furfureen Khilaafadii Islaamka. Waxay gaalo ka tagtay xisbi Bacthi la yiraahdo oo u dhigma Sa-da ku jirta magacyada jabhadaha Soomaaliyeed. Maaddaama gaalada cad iyo kuwa madowba isticmaaleen wixii khiyaano ku qornaa qaamuuskooda ilaa tii u dambeysay ee Soomaali lala rabay ee ahayd in sidii shuyuukhdii cashaa�irka Ciraaq loogu diray wiilashooda, in shacabka Soomaaliyeed lagu diro Muqaawamada. Inkastoo odayaal qeyliyeen oo qabyaalad afuufeen laakiin Ilaahay dhibkaas waa qaaday. Hadda gaaladu waxay rabtaa in khiyaamadoodii ugu dambeysay ee qaamuuska ku qornayd isticmaalaan oo ah in dad culumo ama ducaad sheeganaya lagu bedelo meeshii qabiilka dabadeedna qof diin sheeganaya la huwiyo magac Soomaaliyeed! Soomaalidu qabiillo bay ka kooban tahay oo magaca Soomaaliyeed baa ka weyn qabiil laakiin waxaa la yaab leh sida Islaamka loo dhexgelin karo gudaha magaca Soomaaliya! �Mas�alada labo arrimood baa laga yiri.�
Waagii Hindiya iyo waddamo badan ka baxeen gacanta muslimiinta, gaaladii reer Yurub baa fadwada u kala qaadi jirtay culumada dhexdeeda! Haa culumada dhexdeeda. Hadda waxaad maqlaysaa Bhuko oo leh: waxa Kismaayo ka socda shuqul kuma laha Islaamka! Soo meydaan arag Zenawi iyo CIA-da oo leh: Shabaa